Vaovao - Fampandrosoana sy fananganana indostrialy ny takela-by ho an'ireo mpampifandray elektrika
Tamin'ny 25 feb.2020, ny departemantan'ny tsena ao amin'ny Jitai Electronics Co., Ltd dia nikarakara ny fivorian'ny tsena mahazatra, Tao anatin'ity fivoriana ity dia nanapa-kevitra haingana izahay fa hampifandray haingana ireo mpampifandray elektrika mba hanomezana ny tsena eran-tany ny mpampifandray elektrika manana kalitao tsara sy vidiny tsara kokoa.
Ny departemantan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana dia nanondro fa ny mpampitohy herinaratra dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny aerospace / aviation, noho ny fitakiana lanja kely kokoa ho an'ny fitaovana elektronika, ny firaka aliminioma kely tsy dia matevina dia fitaovana be dia be sy tonga lafatra ho an'ny fiangonana. ary ny fanaparitahana tsara sy ny haitao matotra ary tsy dia sarotra loatra amin'ny famoronana sy ny vidiny ambany amin'ny famokarana dia mety amin'ny fampiasana betsaka, mba hahafahan'ny orinasanay manokana mpampifandray elektrika mifanaraka amin'izany.
Nahita vahaolana tamin'ny olan'ny teknika efatra izahay tamin'ny ezaka efa an-taonany maro.
Ny coefficient 1.Eppansion dia mety mifanandrify amin'ny fonosana firaka aliminioma sy ny fisafidianana fitaovana ho famehezana amin'ny insatera fitaratra.
Ny lavaka famehezana vera 2.Small dia nahatonga ny sarotra tamin'ny famolavolana insatera fitaratra ary ny fiantohana ny fandeferana mifanaraka amin'ny fandeferana ary koa ny haavony mifanaraka amin'ny fitakiana fampiasana.
3.Small firamainty pitch, coefficient fanitarana hafanana eo amin'ny fonosana sy ny firaka dia lehibe ary avo ny famolavolana ny maody.
4.Ny teknolojia electroplating an'ny firaka poakaty misy lavaka fitaratra kely
Ny fivoaran'ny mpampifandray elektrika vita amin'ny firaka aliminioma dia hanokatra ny tsenan'ny orinasanay hanatevin-daharana ny fonosana vy misy ny mpampitohy herinaratra mahitsizoro mirco ary hanatsara ny toerana amin'ny famolavolana sy ny manfuacturing ao amin'ny indostria mandritra izany fotoana izany dia manatsara ny haavon'ny fikarohana siantifika amin'ny fonosana mpampifandray herinaratra ary ataovy ny fanomanana teknika ho an'ny fampandrosoana teknolojia amin'ny ambaratonga avo kokoa any aoriana.
Jitai Electronics Co., Ltd dia manaraka ny fanavaozana tsy misy farany mba tsy hijanonantsika mihitsy ny dingana mialoha, hanomezana vahaolana tsara ho an'ny mpanjifa ho an'ny fitarihanay ny ezaka izahay. Raha ny ezaka tsy misy farany dia ho lasa mpitarika eo amin'ny sehatry ny mpampita elektrika isika.